Nakatona ny Kianja Mena Mosko taorian'ny fianjeran'ny rindrin'i Kremlin
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Nakatona ny Kianja Mena Mosko taorian'ny fianjeran'ny rindrin'i Kremlin
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nakatona ny Kianja Mena Mosko taorian'ny fianjeran'ny rindrin'i Kremlin.
Ny rivotra mahery dia namely an'i Moskoa, niteraka korontana teny an-dalambe ary nandrava scaffold aza, nanimba ny rindrin'i Kremlin malaza.
Ny filoha rosiana Vladimir Putin dia nanome tsiny ny toetr'andro ratsy hatrizay, toy ny doro tanety sy tondra-drano mahatsiravina, noho ny fiakaran'ny hafanana.
Tamin'ny fanambarana navoaka tao amin'ny vavahadim-baovao monisipaly ao Moskoa, nampitandrina ny mponina ny tompon'andraikitra mba hitandrina, amin'ny filazany fa mety hahatratra 20 kilaometatra isan'ora ny rivotra.
Ny iray amin'ireo fizarana amin'ny rindrin'i Kremlin dia tsy hita tanteraka taorian'ny fitsofohan'ny rivotra.
Rivotra sy orambe ary oram-baratra mahery no nandrava ny renivohitr'i Moskoa androany.
Ny fitsokan-drivotra mahery dia niteraka famonoana olona, ​​fianjeran-kazo, fandefasana fako manidina mankeny amin'ny arabe ary nanimba ny rindrin'ny Moscowfiarovana mafy Kremlin.
Moscow Nandefa fanambarana tao amin'ny vavahadim-baovao monisipaly ny tompon'andraikitra amin'ny tanàna, nampitandrina ny mponina mba hitandrina, noho ny rivotra mety hahatratra 20 kilaometatra isan'ora.
"Miangavy anao mba hijanona ao an-trano raha mety mandritra ny andro ratsy," hoy ny fanambarana ofisialy, "mitandrema tsara eny an-dalambe, aza manalokaloka eo akaikin'ny hazo ary aza mametraka fiara eo akaikin'izy ireo."
Ny andalana rehetra mankany MoscowNy Kianja Mena malaza dia nosakanana teny amin'ny arabe manodidina rehefa tapitra nianjera ilay fisakafoanana Kremlin rindrina aloha androany.
Raha ny filazan'ny sampandraharahan'ny vonjy taitra, ny scaffolding amin'ny Kremlin nianjera ny rindrina ary nanimba ny iray amin'ny rindrin'ny rindrina.
Talohan'izay dia nanambara ny biraon'ny sampan-draharaha misahana ny fiarovana ny fanjakana Federaly Rosiana fa noho ny fitsio-drivotra mahery no nitrangan'izany, tsy nisy kosa ny naratra.
Araka ny voalazan'i Putin, ny fitomboan'ny isan'ny trangan-toetrandro mihoampampana dia "raha tsy tanteraka, dia farafaharatsiny farafaharatsiny, noho ny fiovan'ny toetr'andro manerantany."